कसरी बढाउने शरीरको आन्तरिक उर्जा ? | सुदुरपश्चिम खबर
कसरी बढाउने शरीरको आन्तरिक उर्जा ?
Poke bowl salad plate. A traditional local Hawaii food dish with raw marinated ahi yellowfin tuna fish. Woman sitting on beach eating lunch.
कुनै पनि मानिसमा आन्तरिक शक्ति कम भएपछि उसले गर्ने हरेक किसिमको काममा त्यसको प्रभाव देखिन थाल्छ । आन्तरिक शक्तिको अर्थ यो हो कि हाम्रो शरीर भित्रको उर्जा या शारीरिक बल । सामान्य शब्दमा भन्नुपर्दा अँग्रेजी शब्दमा स्टामिना अर्थात् आन्तरिक शक्तिले व्यक्तिद्वारा कुनैपनि काम गर्नको लागि राख्ने शारीरिक एवं मानसिक तागतलाई जनाउँछ ।
त्यसैगरी, आमरुपमा आन्तरिक शक्ति भन्नाले शारीरिक कार्यहरु गर्ने क्षमतालाई बुझिन्छ । आन्तरिक शक्तिले मानसिक कार्यलाई समेत लामो समयसम्म जारी राख्न मद्दत गर्दछ ।
शरीरमा आन्तरिक शक्ति कम हुँदा कस्तो संकेत पाईन्छ ?
– थोरै हिँड्दा वा एक–दुई सिँढी चढ्दा पनि थकाई लागेको महशुस हुनु ।
– कुनैपनि शारीरिक वा मानसिक कामलाई लामो समयसम्म गर्न नसक्नु र केही समयमा नै थकाई एवं चक्कर लागेको जस्तो महशुस हुनु ।
– कुनै काम नगर्दा पनि पसिना आईरहनु ।
– भोक नलाग्नु ।
– हरेक समय आफैंलाई थाकेको जस्तो महशुस हुनु र चक्कर आईरहनु ।
– आँखा अगाडि कहिलेकाहीँ धुलो छाउनु ।
– कुनैपनि किसिमको काम गर्नमा मन नलाग्नु ।
– हात खुट्टामा दुखाईको महशुस हुनु ।
– अत्यधिक निद्रा लाग्नु आदि ।
के गर्दा हुन्छ शरीरमा आन्तरिक शक्तिको कमी ?
निद्रा नपुग्नाले – जो मानिस रातमा दैनिक ७ देखि ८ घण्टासम्म सुत्दैन । त्यस्ता मानिसको शरीरमा बिस्तारै बिस्तारै तागत कम हुन थाल्छ । जसले सो व्यक्तिलाई कुनैपनि काम गर्न मन लाग्दैनन् ।
पानी कम पिउनु – हाम्रो शरीरको ७० प्रतिशत हिस्सा पानीबाट बनेको हुन्छ । यस्तो स्थितिमा शरीरमा पर्याप्त पानी भएन भने शरीरमा आन्तरिक शक्तिको कमी हुन लाग्छ । त्यसकारण पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ ।
कार्बाेहाईड्रेटको कमी – धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ कि कार्बाेहाईड्रेडको सेवनले नै शरीरलाई सबैभन्दा धेरै शक्ति दिने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो खानामा कार्बाेहाईड्रेडको मात्रा बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
आन्तरिक शक्ति बढाउनको लागि के–के खाने ?
आन्तरिक शक्ति बढाउनको लागि हामीले हाम्रो घरेलु खानामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जसको लागि निम्न खानाहरु उपयुक्त हुने गर्दछ ।
१. दूध र मह – शरीरमा आन्तरिक शक्तिको लागि दूध र मह अति आवश्यक पौष्टिक तत्व हो । दैनिक एक गिलास दूधमा २ चम्चा मह राखेर खाने हो भने यसले शरीरमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन, मिनेरल्स र कार्बाेहाईड्रेड प्रदान गर्ने गर्दछ ।
२. नरिवलको पानी – नरिवलको पानी मानिसको लागि अमृत समान हुन्छ । किनकी यसमा भरपुर मात्रामा एन्टीअक्सिडेन्ट, मिनेरल्स र भिटामिन जस्ता तत्वहरु पाउने गरिन्छ । जुन हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न एवं शरीरमा आन्तरिक शक्तिलाई मजबुत बनाउनको लागि समेत विशेष महत्व राख्ने गर्दछ । हरेक दिन उठेर खाली पेटमा नरिवलको पानी खानाले शरीरमा भरपुर उर्जा प्रदान गर्ने गर्दछ ।
३. दूध र केरा – दूध पिउनुको महत्व हेर्ने हो भने यो जेका लागि पनि फाईदाजनक हुने गरेको छ । तर, यसलाई हामीले केरासँग मिलाएर खाने हो भने यसको महत्व अलिक भिन्दै हुने गर्दछ । यसले शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा मजबुत बनाउनको लागि मद्दत गर्ने गर्दछ । मानिसहरु प्रायः दूध र केरालाई ‘मिल्क शेक’ बनाएर पिउने गर्दछन् । प्रायः क्रिकेट खेल होस् या कुनै अरु खेल नै किन नहोस् । यो खेलको समयमा खेलाडीहरुलाई केरा खान दिने गरिन्छ । किनकी केराले हाम्रो शरीरमा तीब्र गतिमा शक्ति बढाउने गर्दछ । हरेक दिन रातमा सुत्नुभन्दा पहिले हल्का तताएको दूधमा २ या ३ वटा केरा हालेर ‘मिल्क शेक’ बनाउन सकिन्छ । यस्तो केवल एक सातासम्म निरन्तर गर्दा यसले शरीरमा नयाँ उर्जा थप्ने गर्छ ।
यस बाहेक पनि पालकको साग, चनाको साथमा शख्खर या किसमिस, नियमित पानी पिउनु पनि शरीरमा आन्तरिक शक्तिको लागि आवश्यक कुरा हो । यसबाहेक फल र हरियो तरकारीले पनि शरीरको विकासमा ध्यान दिने गर्दछ । हरियो तरकारीमा भिटामिन, मिनेरल्सहरु पर्याप्त मात्रामा पाउने गरिन्छ । यस विपरित स्याउ, अनार, केरा, फल आदि हुने गरेको छ । त्यस्तै, बियर, अण्डा आदि पनि शरीरको विकासको लागि आवश्यक खाद्य बस्तु हो । (अनलाइनखबर बाट सभार)
स्वस्थ जीवनका लागि खानपानमा कसरी ध्यान दिने ? यस्तो छ तरिकाहरु !!
यी ५ अवस्थामा झुक्किएर पनि केरा नखानुस् !!